Diyaarado dagaal oo looga shaki qabo kuwa Kenya oo duqeeyay saldhig ay Al-Shabaab ku leedahay gobolka Jubbada Dhexe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandDiyaarado dagaal oo looga shaki qabo kuwa Kenya oo duqeeyay saldhig ay Al-Shabaab ku leedahay gobolka Jubbada Dhexe
October 30, 2016 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Diyaaradaha dagaalka ee Kenya. [Sawirka: Reuters]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Diyaarado milatari oo looga shaki qabo kuwa Kenya ayaa weerar duqayn ah ka geystay koonfurta Soomaaliya, iyaga oo bartilmaameedsaday saldhig tababar oo kooxda Al-Shabaab ku leedahay gobolka Jubbada Dhexe, sida ay sheegeen ilo-wareedyada.
Diyaaradaha ayaa duqeeyay deegaanka Maaleyda oo u dhaxeeya magaalooyinka Jilib iyo Buu’aale, halkaas oo ay Al-Shabaab ku leedahay saldhigyo tababar oo ay ku tababarto dagaalyahano.
Sida ay ilo-wareedyada sheegayaan dhowr maleeshiyaad ah ayaa ku dhimatay duqaynta.
Kooxda Al-Shabaab kama aysan hadlin duqaynta weerarkaas dhacay maanta oo Axad ah.
Ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay masuuliyada weerarkaas duqaynta ah, balse diyaaradaha dagaalka ee dalka dariska ah ayaa horey gobolada Jubbooyinka uga geystay weeraro kan lamid ah.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Talaado ah gaaray caasimada Soomaaliya, Muqdisho, si uu uga qaybgalo shirka hoggaamiyaasha siyaasada ee Soomaaliya. Masuuliyiin katirsan dowlada federaalka Soomaaliya oo ay kamidyihiin wasiirka [...]